LS Gruppen :: Somaliska / Somali
Kooxda LS waxay qusaysaa qoysaska iyagoo la wadaagaya aragti ku dhisan shucuur iyo kalgacal. Adeega waxaa loola dhaqmayaa hab ay ku jirto taxadar iyo tayo sare iyadoo bukaan socodka go,aankiisu iyo rabtaankiisu yihiin kuwa dadaal ahaan diiradu saarantahay.
Had iyo jeer waxaanu ku deeqnaa xanaanayn fiican si ay qaybtani u noqoto door hogaamineed iyo hab wanaag. Waxaanu si dagan uga shaqaynaa sinaanshaha labka iyo dhediga, is dhexgalka dadka iyo kala duwanaanshaha dadka si loo ilaaliyo loona xifdiyo baahiyaha kala duwan ee shakhsiga waxna looga qabto sida ugu haboon.Xaalada aasaasiga ah ee habsami u socodka caawinta qofka iyo hoygiisa waa is gaadhsiin iyo is faham. Sidaas darteed waa arin la hubo inaad heli karto caawin shakhsi ahaaneed iyo tu hoyba taasi oo ay kaa caawinayaan dad ku hadla afkaaga hooyo islamarkaana aqoon iyo fahamba u leh dhaqankaaga iyo qiimahaagaba. Sidaas darteed hadaanu nahay kooxda caawiyayaasha ee LS waxaanu ku deeqnaa caawimo shakhsi taasi oo ku baxda afkaaga hooyo islamarkaana ku dhisan fahan iyo ixtiraam ku saabsan dhaqankaaga.Waxaanu had iyo jeer tixgalinaa luuqada hooyo, dhaqamada iyo diimaha kuwaasi oo ku salaysan dhaqamada kala duwan iyo aragtiyaha. Iyadoon loo eegayn asalka qofka iyo haduu yahay qof laxaadla, waxaa waajiba in loola dhaqmo si iskumida. Tan waxay xaqiijinaysaa ugu yaraan jinsiyada qoyska, luuqadooda iyo dhaqankoodii asal ahaaneed.
Si aad u hesho caawimada ugu haboon ee ku salaysan baahidaada iyo asalkaaga, waxaanu shaqaalaysiinaa kalkaaliye fahmi kara luuqadaada iyo dhaqankaaga, anagoo ka duulayna talada aad na siiso ee ku saabsan rabitaankaaga.Si kastaba ha ahaatee hadii aad doorbidayso inuu ku caawiyo qof kugugu dhow, islamarkaana dhamaystiri kara baahidaada shakhsi ahaaneed waanu shaqaalaysiin karnaa, tusaale ahaan saaxiibkaa ama qof qoyskaaga ah. Sidaas darteed muhimadayada koowaad waxay noqonaysaa, masuuliyada shaqaalaha ee shakhsiyaadkaas. Islamrkaa doorkayaga ku saabsan caawintaada waa mid adiga ku khusaysa. Hadii aanad rabin inaad toos noola xiriirto, waxaad la hadli kartaa qof ka tirsan ururka ama jaaliyadaada.Waxaanu aasaasnay xiriiriyayaal iyo asxaab leh diimo iyo qoomiyado kala duwan kuwaasi oo si fiican u garanaya anaga iyo shaqadayadaba.Xagan hoose waxa ku yaal macluumaad ku saabsan ururkaaga halkaasi oo aad ku baran karto sida aanu u dabooli karno nolol maalmeedkaaga una hagaajin karo tayada noloshaada. Personlig assistans